बुबालाई पहिलो इमेल | Alankar's Blog
कथा / गजल / कविता
बुबालाई पहिलो इमेल
Posted on 2/23/2011 by अलङ्कार अर्याल
हजुरलाई ओनलाइनमा हेरिरहन्छु तर कहिले देख्दिन ! यहाँको समय र त्यहाँको लोडसेडिङको कारणले गर्दा पनि होला ! शनिवार र आइतबार चाहिँ कुरा गर्न मिल्छ स्काईप् मा !
यहाँ सबै कुरा सिस्टममा चल्ने रहेछन् ! बाटोमा हिंड्दा गाडी आफै रोक्छन्, हिड्ने मान्छेले कुर्न पर्दैन ! ट्रेन र ट्राम जति बेला पनि पाइन्छन् ! मलाई ट्रेनमा टाउको दुख्यो २ दिन जति तर अब ठिक भएको छ, ट्रेनमा सजिलो हुन्छ जहाँ जान पनि ! एउटा स्टाडप्लान भन्ने हुन्छ त्यो हेर्दै जहाँ पनि पुगीन्छ ! यहाँ ट्रेन, ट्राम वा बसमा पहिले ओर्लिनेलाई ओर्लिन दिनु पर्ने रहेछ त्यसपछी मात्र चड्नु पर्ने रहेछ ! त्यो कुरा मलाई एकदमै ठिक लाग्यो किनकि ओर्लिने मान्छे ओर्लिन पाएन भने त फेरी अर्को स्टेशनमा ओर्लेर फेरी अर्को ट्रेन चढेर फिर्ता आउनु पर्छ ! चड्ने त धेरैमा ३-४ मिनेट कुर्यो भने अर्को चढ्न पाउँछ ! अनि एक्सिलेटरमा दाहिने तिर उभिनु पर्ने रहेछ, देब्रे तिर खाली छोडेर ! कोहि हिड्न चाहनेहरु देब्रे तिरबाट हिड्न सजिलो होस् भनेर ! यहाँ गाडीहरु पनि नेपालको भन्दा उल्टातिरबाट हिड्छन् , दाहिने पारेर ! म नेपाल जस्तै सोचेर देब्रे तिर ट्राम कुरेर बसें तर ट्राम आयो तर उल्टा जाने रहेछ अनि फेरी बाटो काटेर अर्को तिर उभिएँ अनि बेक्कारमा ६ मिनेट बढी कुर्न पर्यो ! कुर्ने ठाउँमा अब कति मिनेटमा अर्को ट्रेन/ट्राम आउँछ भनेर देखाउँछ अनि झन सजिलो हुन्छ ! यहाँको मलाई मन नपरेको कुरा भनेको सबैजना बाटोमा चुरोट तान्दै हिड्छन् अनि मलाई बाटोमा हिंड्न त्यति मन लाग्दैन बरु ट्रेन र ट्राममै हिडेको ठिक !
म आएको अर्को दिन देखि एक्लै नै आफ्नो काम गर्न गएँ ! नक्सा हेर्दै जानु पर्ने घर नै पुगिने रहेछ ! कसैलाई बाटो सोध्न पर्दैन ! हिजो-अस्ति घाम लाग्या छ तर जाडो भने माइनस नै हुन्छ ! -८, -५ हुन्छ ! अर्को हप्ता देखि जाडो कम हुन्छ होला ! मैले आएर युनिवर्सिटीमा आफुलाई दर्ता गरें अनि भाषाको लागि पनि भर्ना गरेको छु अब इन्सुरेन्स गर्न मात्र बाँकी छ ! अब ३ महिना लाग्छ यो भाषा सक्किन अनि त्यसपछी युनिवर्सिटीमा पढ्न पाइन्छ ! नेपालमा पढेको भाषाको सर्टिफिकेट यहाँ काम लग्यो ! त्यसैले एकै चोटी अब तेस्रो लेभलमा भर्ना भयो ! मैले यहाँ आएर इंग्लिश बोलेको छैन ! यहाँकाले बोलेको सामान्य कुराहरु प्रायः बुझ्ने रहेछु ! धेरै नै गार्हो शब्दहरु बुझ्न अप्ठारो हुन्छ ! तर इंग्लिश नबोली बैंकमा खाता खोलें, भाषाको भर्ना गरें, युनिवर्सिटीमा दर्ता गरें अनि स्टुडेन्ट कार्ड बनाएँ ! मेरो युनिवर्सिटी पनि धेरै ठुलो रहेछ ! हरेक बिल्डिंग छुट्टा छुट्टै बाटोमा पर्छ अनि बाटोहरु धेरै लामो लामो हुन्छ ! एउटा बाटो कम्तिमा ३ किलोमिटर जति हुनेरहेछ ! पछि क्लास लिन पनि छुट्टा छुट्टै बिल्डिंगमा जानु पर्छ अनि इन्टरनेटबाट हेर्नु पर्छ लोकेसन र टाइम !
ब्याचलर जस्तो हुदैन रे मास्टर्सको पढाई, धेरै रिसर्च गर्ने खालको हुन्छ रे ! मैले अस्ति एउटा केटो भेटेको थिएँ ! त्यो पनि म जस्तै इन्जिनियरिङ गरेर आएको रहेछ पोल्यान्डबाट ! उसलाई भने भाषाको समस्या छैन, हामीले हिन्दी जानेको जस्तै तिनीहरुले पनि यहाँको भाषा जान्ने रहेछन् !
धेरै हिड्नु पनि पर्दैन, जता पनि ट्रेन र ट्राममा जान मिल्छ ! ट्रेन भनेको अन्डरग्राउण्ड हुने रहेछ अनि ट्राम भनेको बस तर ट्रेनको जस्तै लिक भएको र ३ ओटा डिब्बा भएको हुने रहेछ !
यहाँ ट्वाइलेटमा धारा हुँदैन रहेछ, पपेर युज गर्न पर्ने रहेछ ! त्यो चाहिं मलाई एक दुइ दिन अप्ठारो लाग्यो अहिले त बानि परेको छ ! बिहान ट्वाइलेट गएपछी बाथरूम गएर नुहाउदा खासै फरक नपर्ने रहेछ !
आएको १ हप्तामै धेरै कुरा जानिसकेको जस्तो लागेको छ, कहाँ जाने, के गर्ने, कसरि बोल्ने आदि कुराहरु ! मेरा केहि फोटोहरु एट्याच्च गरेर पठाउँदै छु !
मम्मी, मेरो चिन्ता गर्न पर्दैन ! दिज्जु भिनाजु भान्जा भान्जीसंगै भएकोले होला पुरानो बानेश्वरबाट मण्डीखाटार गएजस्तै लागेको छ ! नेपालको ब्रेड मैदाले मात्र बनाएको पातलो हो तर यहाँको ब्रेड धेरै बाक्लो हुने रहेछ, यसलाई फापर, गँहु, मैदाहरु मिलाएर बनाउने रहेछन् त्यसैले २ चाना खाए अगाईन्छ ! त्यसमा बिचमा चिज,जाम, बटर लगाए खाँदा झन् मिठो हुन्छ ! तर मलाई बटर भन्दा जाम नै मन पर्छ ! हजुरले पठाई दिएको लप्सीको आचार आधि भइसक्यो ! सबैलाई मिठो लागेको छ ! हजुरले बरु ब्लडप्रेशरको औषधी खान बिर्सिन हुन्न ! बरु म्याद हेरेर धेरै ल्याए हुन्छ !
फेरी धेरै कुराहरु संगालेर लामो इमेल गर्छु ! आजलाई यति नै !
5 Response to "बुबालाई पहिलो इमेल"
Well, Congratulations and haveagrt time there...
Happy to know, you have adjusted yourself with inaweek..
ब्रो को भिएना बसाइ रमाइलो होस्
एता तिरा को चिन्ता लिनु पर्दै न :पि
Dilip Acharya Says....
दामी पोस्ट । (बुबालाई लेख्नु भएको भएपनि हामी सबैले समेत मन पराइर पढ्यौँ है :) ।
उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित !
खूब रमाइलो लाग्यो |
सबैलाइ यहाँ ब्लगमा स्वागत छ। यहाँ म मेरा मनमा लागेका कुराहरु कथा, कविता, गजल वा लेखका मध्यम बाट बाँड्ने प्रयास गर्छु। कृपया सुझाब र प्रतिक्रिया दिनु होला।
Nepali Blog Updates